Tadiom-pitiavana | 16
Tonga tao an-tokontany ny fiaran-dRatrema, niara-nivoaka izy mianaka dia niditra ny trano. Alexia nankany an-dakozia nitady izay hohaniny fa efa tena atoandro be ny andro. Ratrema kosa tonga dia nankany amin’ny efitranony fa haka izay akanjo sy fitaovana samihafa mety hampiasain’i Malala any amin’ny hopitaly, sady koa nandray ny telefaonina hiantso ny any am-piasàny mba hanontany vaovao sy hametrapetraka izay tokony hataon’ny mpiasany amin’ny tsy maha-eo azy afaka fotoana vitsy.
Vita izay dia nangonin-dRatrema ny peignoir, ny akanjo fitena sy ny serviettes isan-karazany ka napetrany teo ambony latabatra kely. Nosintoniny koa ny vata sarihana akaikin’ny fandriana hangalàny nyranomanitr’i Malala… nisy zavatra nanohana anefa tao, ka voatery nisintona mafy ilay vata izy, izay nisokatra ihany. Nalainy ilay ranomanitra dia notazoniny; mbola nanohana ihany anefa ilay zavatra raha hanidy ilay vata izy ka nokarohany tamin’ny tànany ilany izay tao.
Nosintoniny ilay zavatra, kanjo... silipo gris no hitany tao. Nojereny tsara ilay izy, ary nanomboka nikentrona izay tsy izy ny tarehany. An’iza ity??? Efa fantatr’i malala tsara fa tsy tia silipo toa itony aho fa kalisaona no fanaoko. Tsy ahy ity, sady toa efa nampiasaina izy izany? Tsy ho ahy mihitsy ity fa…. tena an’ilay boriky lahin-doza iny ity!!!
- "Herin-dooozzzzaaaatra!!" sady natsipiny mafy terý amin’ny rindrina ilay silipon’i Hery niaraka tamin’ilay ranomanitra teny an-tànany. Nipoaka mafy ilay izy ka vaky terý ilay tavoahangy.
- "Vonoiko iny! Tsy vanona! Olom-boaozona!..." sady notohizan-dRatrema an’izao teny ratsy rehetra izao!!!
Nahare izany Alexia dia nihazakazaka niakatra tany ambony tao amin’ny efitranon-drainy. Nijery izay nitranga kanjo fofon-dranomanitra midofaka no henon'ny orony.
- "Inona izany ry Papa? fa misy inona? inona izany ranomanitra be mameno trano izany???"
Tsy namaly Ratrema fa izay lamba teo am-pandriana teo no natsipitsipiny tamin’ny tany. Novonjen’i Alexia ny rainy hampitony azy.
- "Shhhh," hoy Ratrema sady lasa nidina tany ambany izy.
- "Fa maninona i Papa e!" sady nijery ny manodidina azy izy, ka nanontany tena. “Sanatria ve dia ho fantatr’i Papa ny zavatra nitranga tamin’ny vao maraina teo?” hoy izy. Saingy tsy azon’i Alexia veroka kosa ilay silipon’i Hery.
Ratrema amin’io any ambany mampitony ny fony kanefa manefika azy ny fialonana hamono hahafaty ity sipan-janany mpamoa-fady.
Fa tany amin’ny hopitaly…
- "Fa maninona ny silipoko?” hoy i Hery, “noheveriko fa nanonofy nanao isika tamin’ny vao maraina be iny fa tsy tadidiko intsony. Gaga be aho tamin’ny maraina nifoha raha tsy nanao silipo intsony."
- "Sahiran-tsaina tokoa ialahy ry Hery ka adinon’ialahy hatramin’ny nataontsika,” sady nihomehy ihany Malala, nisintona ny lamba firakotra fa nahatsiaro nangatsiaka izy.
- "Fa ahoana ilay resaka silipo," hoy i Hery nanatona an’i Malala.
- "Aan, aan, ann! Nampirimiko ao anaty tiroara fotsiny ilay izy; fa ny atahorako dia sao hitan-dRatrema ka loza. Fantatrao moa fa Ratrema tsy manao silipo mihitsy? Efa nampirisika azy hanao ihany aho fa tsy tiany?? Ka tena nahafinaritra ahy ilay siliponao dia nalaiko nony vita ny nataontsika."
- "Tssss! ianao ity!! Fa mbola tsy azoko mihitsy ity nataonao omaly, fantatrao tsara fa mitady ny reniko aho, dia sahinao nandaingàna hatramin’ny maraina teo, fa ny hanao amiko ihany no tena mahafinaritra anao!"
- "Izaho koa aza ange ry Hery tsy nahita hatao tamin’ilay Mamanareo safotra iny e!"
- "Shhh, lasa aho fa ny Mamako izay ary tsy fantatra izay nahazo azy!" sady nankeo amin’ilay berceau nisy an’i Toky izy no nanafosafo ny lohany, dia lasa nony avy eo!
Nifanena tamin'ny Dadabeny i Hery nony teny an-dàlana…
- "Fa taiza ialahy letsy an? andao haingana fa nasain’ny dokotera tadiavina maika ialahy. Andao haingana mihitsy! Fa ialahy ity ve mba misaina e! mbola amin’ny toeram-pamelomana anie ny maman’ialahy e!"
- “Fa maninona i Mama ry Dadabe?" sady sempotsempotra izany i Hery.
Nony afaka kelikely, rehefa avy nisakafo Ratrema ka somary tony, dia niantso an’i Alexia hanangona izay entana ilain-dreniny. Rehefa tafidina ny zanany, dia niverina tao amin'ny efitrano fandriany indray izy ka io eo mbola hitany teo ilay silipo. Noraisiny dia nataony tao anaty harona sachet kely ary nataony am-paosy. Niantso ny mpanampy izy rehefa avy eo handroaka ny vaki-tavoahangy sady namoha ny varavaran-kely fa nanentoento loatra ilay fofon-dranomanitra. Nataony anaty harona izay sakafo mety ho tian’i Malala dia nanainga izy mianaka.
Niriodriotra mafy Ratrema teny an-dàlana, sady mieritreritra izay valifaty hataony an’i Hery, satria tena sangy mihoatra ny loha izao ataon’izy sy Malala izao. Hitany sy tsapany ihany koa fa manao mody marary ity Malala ity, ka zarany aza izy any amin’ny hôpitaly mba tsy hisian’ny gidragidra.
- "Papa a! aza mandeha mafy be ho’aho fa kely ny aiko!"
- "Shhhh," hoy Ratrema… Dia mbola tsy azonao ihany ve anaka ny mahazo ahy?"
- "Fantatro e! fa na izany aza!"
Tsy niteny intsony Alexia fa hoy izy tany an-tsainy tany: Tena fantatr’i Papa ilay nataon’i Hery sy Malala tamin’ny maraina teo. Ny ahy moa dia toneko foana ny foko na dia tsy fantatro aza izay hiafaràny. Ataoko ahoana moa, tahaka ny voasinton-javatra mihitsy i Hery amin-dreniko… nefa izaho tena tia azy koa.
Mandritra izay fotoana izay Ratrema dia hita tena lasan’eritreritra lalina feno hatezerana toa miteny hoe: hitan’ialahy eo ry Hery ny hanaovako an’ialahy, hihinana ny *#&$£¤n’ialahy ialahy anio, fa andraso aho ho tonga any!!!
Tany amin’ny hôpitaly kosa tamin’izay:
Nafana i Malala ka namonjy ny efitra fandroana. Nesoriny ilay akanjon’ny hôpitaly dia nalefany ny rano, nahazo aina erý izy naheno ny fikorinan'ny rano teo amin'ny kibony. Notakariny ny fivaviany izay nolalovan’ny rano mafampàna dia nosafosafoiny mora ary nampidiriny tany ny fanondrony roa hanasàny ilay lavaky ny fahafinaretany. Natosiny indroa na intelo tany ny fanondrony ka tsapany fa nisy onjam-pahafinaretana niakatra moramora tany anatin’ny ati-dohany tany. Tsaroany ilay nataon’i Hery azy vao teo; nahatsiaro sambatra erý zy… satriny hanohy izany eo foana.
- "Mhhhhhh, Hery, ilay malalako, mhhhhhh!"
Najanony ihany anefa afaka kelikely fa reny mitambesatra taminy ity lanjan’ny kibony. Izy rahateo mitsangana. Nidiny ny robinet dia nosintoniny ilay serviette teo akaikiny ary namaininy ny vatany. Nampidiriny ilay akanjo fitena, saingy tsy nanidy bokotra izy, ka niseho ny kibony sy ny feny. Izy rahateo moa nanantena ny maha-irery azy tao amin’ilay efitra.
Nony nanokatra ny varavarana anefa izy dia taitra nahita ny vadiny nipetraka teo amin’ny sezan’ny mpiandry marary.
- "Ratrema, hay efa tonga ianao? efa ela angaha ianao no teo?"
- "Ie, naka ny akanjonao sy nitondra sakafo aho dia niverina; Alexia nankany amin’i Hery, fa izaho tonga dia nankatý."
Nizitizity erý Malala nampiseho ity kibony amin’ny vadiny dia natohotohony teo amin’ny tarehin-dRatrema sady nanafosafo ny lohany izy.
- "Aleo aho aloha hatoritory etsy", hoy Malala, sady namonjy ny fandriana izy nony avy eo.
Nitsangana Ratrema sady namoaka ilay harona sachet kely tany am-paosiny:
- "Inona ity?" hoy Ratrema, sady nomeny an’i Malala.
Nosokafan’i Malala ka ilay silipon’i Hery no tao…
- "Sao dia eritreretinao fa badolahy aho ka tsy hahafantatra ny ataonareo amiko!" sady
noritin-dRatrema teny an-tànan’i Malala ilay silipo ka natsipiny tamin’ny tany.
Asa na nanao ahoana fa lasa niseho tanteraka mihitsy ny fihanjahan'i Malala taorian'ilay fihetsika mahery nataon'i Ratrema nisintona ny silipo teny an-tànany. Hitan-dRatrema avokoa ny vatany iray manontolo. Naforitr’i Malala ny ranjony ary nosokafany ny feny ka nanaitra ny fijerin’ity vadiny.
Tezitra ny anao lahy, kanjo tsapany fa mihenjana ny filahiany tany anaty patalohany tany. Nosintoniny ny fe sy ny ranjon’i Malala hanatona ny azy, novahany ny fehikibony ary naborotsany ny patalohany. Navoakany ny filahiany efa tena nihenjana be, Malala amin’io tsy nahateny fa dia nanaiky tsy sazoka nefa koa toa te-hanohy ilay fahafinaretana notapahany tao anaty douche. Nosokafany be ny feny tahaka ny nataony tamin’i Hery teo, dia niditra tany anatiny lalina tany i Ratrema sady tsy niteny mihitsy fa ny fihetsiny mahery vaika tsy ankitsitsy no toa tiany hampita amin'ity vadiny ny valifaty ataony.
Miezaka ny maka fihiny i Malala amin'izay nanaovan’ny vadiny azy, ny tànany mitazona ny kibony ihany tsy handona mafy ny kibon-dRatrema. Nihozongozona mafy ny fandriana ka nandona ilay latabatra kely tsy lavitra teo. Very nianjera ny vera nisy rano teo amboniny. Tsy nahataitra azy roa anefa izany, fa ny nataony ihany no notohizany. Rehefa tsapan-dRatrema fa nanatomotra ny ho tonga ny azy, dia navoakany ny filahiany ary nanatona ny loham-pandriana izy sady niteny hoe: "Ao nonoy…" Nanaiky tsy fidiny i Malala sady nikisakisaka nanatona ny lohany amin’ny sisim-pandriana. Vao nitohaka teo amin'ny vavan'i Malala ny an-dRatrema anefa dia nifantsitsitra tonga ny azy, sady nitabataba menomenom-pahasambarana teo izy!
Nandeha naka toerana izy rehefa avy eo mba haka aina aloha, Malala kosa naka mosoara fanary namafa ilay ranon’aina nifafy tamin'ny tarehany sy ny ondam-pandriana.
Tsy tapitapitr’izay, nitsangana Ratrema dia nankao amin’ny douche sady nanidny ny varavarana. Nijanona teo am-pandriana Malala fa reraka sady nahatsapa te hatory.
Tary amin’ny hôpitaly ilany kosa…
Nihazakazaka mafy Hery namonjy ny efitra nisy ny reniny. Nifanena tamin’ny dokotera teo am-baravarana izy, ka ity farany no nilaza taminy mba hilamina sy ho tony. Niditra tao an’efitra izy ka io eo ny reniny hitany efa nahatsiaro tena, nefa tena mbola reraka dia reraka. Nibanjina an-janany ity ramatoa, hita misoritra eny amin’ny tavany ny alahelo, ny fahadisoam-panantenana, ny havizanana. Nitsiky kely izy nahita ity zanany mijoro eo akaikiny!
- "Hery!" hoy izy tamin’ny feo malefaka dia malefaka.
Nanatona azy Hery, nitady hiarina ramatoa fa tsy afaka; narenin’i Hery tsimoramora izy ary nampanarahany ondana tao an-damosiny hiankinany.
- "Hery a! sombin’aiko; avia ianao atý fa malahelo mafy aho!"
- "Mama a! makà aloha aina tsara fa mbola vizana be ange Mama e!"
- "Avia izany zanako izany!” sady niezaka izy hanainga ilay tànany misy fantsona mitondra serum, saingy nosakanan’i Hery.
- "Hery a! mamelà ahy fa diso ny nataoko taminao."
- "Tsy diso izany ianao ry Mama a! izaho daholo no fototr’izao rehetra izao; izaho sy ny hadalako, ny tsy fahafehezako ny tenako… ka aza manahy ny amin’izany ianao fa izay hahasitrana an’i Mama izao no tanjontsika."
- "Zanako ô, kely sisa no hiarahanao amin’ity reninao!"
Nilatsaka ny ranomason’i Hery, ataony ahoana tokoa moa, raha ilay hositranina aza tsy mino intsony ny fanasitranana mbola tokony ho azony? Tsy hirotsaka ve ny ranomaso…
- "Tantaraiko aminao anaka izay mbola tsy fantatrao hatramin’izao mason’andro anio izao: tovovavy bikana sy tsara tarehy tokoa aho talohan’ny nanambadiako. Marobe ireo tovolahy no nisari-zoro tamiko satria tena nanaitra ny olona maro tokoa izany bika aman’endriko izany; eny fa na dia ireo ray aman-dreny sasany aza. Nandalo teto amintsika ny foto-pisainana “hippie”, ka voatarik’ireo namako aho hanao izao rendrarendra sy hadalàna rehetra izao. Tsy nankasitraka ny zavatra nataoko ny ray aman-dreniko. Hany herin’izy ireo dia nitady olona ho vadíko. Lehilahy tsotra izay, tsy noraharahiako mihitsy sady nitsoahako tany am-boalohany, no niarahako. Tsy fantatry ny ray aman-dreniko akory fa efa bevohoka aho tamin’izany fotoana izany! Nesoriko io zaza io, ary tsy nambarako azy ireo mihitsy, noho ny hadisoam-panantenako tamin'ilay lehilahy nampitoe-jaza ahy.
Toy ny noterena aho hanambady ny rainao tatý aoriana satria tsy dia sitrako loatra izy.
Nananosarotra tokoa ny nahazoanay anao, satria efa nivady enin-taona izahay mbola tsy nitoe-jaza ihany aho. Natao daholo ny ala-nenina rehetra, ka teo vao fantatry ny rainao, noho ny filazan’ny dokotera, fa olona efa nanala zaza aho. Kivy be izy tamin’izay, ary nanomboka teo no nahafantarako ny ratram-pony, ka nahatonga ny aretiny nihombo nahafaty azy.
Nisy fotoana aza nisaraka izahay, ka lasa aho nitady lehilahy hafa ary nivezivezy tetsy sy teroa, nanararoatra ny fahatanorana ka nanohy ny filibàna handravàna tanteraka ity tokantrano. Ny fianakaviana amin’io tsy misy mahalala izany fa dia tahaka ny mpivady misaraka tsotra izao no hitany. Fotoana vitsivitsy tato aoriana dia nampodian-drainao indray aho, ka navelany avokoa ny fahotako rehetra. Olon-kendry anaka ny rainao, tsy mba nanao am-po fa tena tsara toetra. Izaho no jamba tsy nahatsapa izany akory. Tsy fantatro mihitsy, fa nony nifampody izahay, dia nitoe-jaza indray aho. Mbola nanohy ny fiarahako tamin'ny lehilahy hafa ihany anefa aho. Toa tsy nahoako akory ny fitiavan-drainao ahy, fa izay sitrapoko sy nahafinaritra ahy ihany no nataoko. Efa bevohoka be tahaka an’i Malala izao aza aho mbola sahy nanao firaisana tamin’olon-kafa ihany. Tsaroako ilay tenin’izay sipako iray izay hoe: “sao dia mba hanody anao izao ataonao izao ry Mihary, tsy fantatrao ange ny ampitso e!” Nisafoaka aho naheno an'io; nofelahako ny teha-maina izy satria tsy nampoiziko ho izay sakaizako izay no hiteny zavatra toa izany tamiko. Ny rainao nandritra io fotoana io, tena tsy nahalala na inona na inona mihitsy! Tonga teto an-tany ianao, tsy noraharahiako akory izay hoe: iza marina ny rainao, fa dia nalefako hanaraka ny onjany teny! Asa, raha fantatry ny rainao tokoa moa izany dia angamba… saingy roa taona taty aoriana monja dia maty ny rainao anaka, noho ny aretim-po tafahoatra nanjò azy. Kapoka mafy tsy zakan’ny aiko no nahazo ahy, ka raha tsy nisy ny ireo raibenao sy renibenao ireo, dia asa izay niafarako. Nanomboka niverina tamin’ny làlan’ny fahitsiana aho rehefa noteren’i Dada sy Mama niditra am-piangonana. Nifona sy nangataka famelan-keloka, saingy tsy nolazaiko tamin’izy ireo kosa ny zava-dratsy vitako taloha, fa ahy sy ny Tompo samy irery izany.
Koa ankehitriny anaka, mahita ny zava-manjò anao aho dia onena ary tena tsapako ny lanjan’ny fahotana rehetra vitako. Izao tokoa no atao hoe: “tsy ny tody no misy fa ny atao no miverina, fa dia tena mandrendrika ahy ny adalana vitako. Izao, milanja ny vesatra mafy noho ny nahazo ahy ity zanako… zanako tsy foiko, hany navelan’ny vadiko ho ahy! Efa tatý aoriana aho anaka vao nahita tokoa, tsy mihambahamba, fa mitovy tanteraka amin’ny rainao ianao. Be fitiavana, eny fa na ny endrika amam-bika aza. Kanefa izao manjò anao izao dia toetra tahafinao avy atý amiko, reninao tsy nahatsiaro hafa-tsy ny nigoka ny tsiron’ny fiainan’izao tontolo izao."
Nisento mafy ramatoa Ramihary, Hery amin’io latsa-dranomaso sady tsy nahateny, nihaino ity reniny mitantara ny fiainany amin'ny feo marefo dia marefo.
- "Mama a!" hoy izy nony avy eo (sady toa niserana tao an-tsainy izay rehetra nataony tamin’i Malala, ka toy ny nisy kanota nively ny hatony) "helok’iza? heloko samirery, helok’i Mama? tsia an! Ny hadalako avokoa no nahatonga izao rehetra izao."
- "Hery a! tadiavo foana ilay fitiavana nananan-drainao, izay no omeo an’i Alexia, ary aza miala amin’ny vavaka fa izay no hany hanavotra ahy tsy ho tafalatsaka amin’ny hantsana mandrendrika izao tontolo izao."
Nisefosefo mafy Ramihary, sady niezaka nisintona ny tanan’i Hery izy.
- "Veloma fa efa io rainao haka ahy, sady latsaka ny ranomasony!" nisento farany izy, dia tapitra ny ainy.
Nigogogogo nitomany i Hery, "Mama! Mama!" sady nanozongozona ny vatany nefa tsy mitempo intsony ny fony…
Nidradradradra sady nitomany mafy izy ka ren’ny raibeny tao ivelany, nikoropaka niditra tao an’ efitra ity farany, ary injay fa nibosesika nihazakazaka ihany koa ny infirmiers nampaneno ny fanairana. Noezahina novelomina Ramihary saingy tara loatra ary tsy nisy azo atao intsony fa efa nitsahatra tsy nitempo intsony ny fony. Ranomaso havozona no nameno ny efitra, na i Dadabe, na i Hery, samy difotry ny ranomaso avokoa. Nanjombona ny fiainan'i Hery; soa fa teo Alexia niezaka mba nampahery azy.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 2:: Hametraka hevitra (1) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
- "Maninona no tonga eto ity fiaran’ny hopitaly ity?" hoy Ratrema, nivaloharika ny tarehany sady nisefosefo be izy!
Tafavoaka ny fiara avokoa ny rehetra namonjy ny vavahady. Saingy nosakanan’ilay olona nanontany Ratrema:
- "Azafady ramose fa tsy misy tokony hitaintainanao mihitsy: tsy misy maninona akory ato."
Tahaka ny tsy ren-dRatrema akory ny tenin’ilay rangahy fa ny varavaram-by no noezahany novahana, kanjo nosintonin’ilay rangahy izy.
- "Aza taitra mihitsy ianao ramose a!" hoy indray izy, "fa tena tsy misy olana hoy aho!"
Nijanona kely Ratrema sady nijery tamin-piketronana ilay rangahy;
- "Ka inona no ahatongavanareo ato, tsy fantatrareo angaha fa bevohoka be ny vadiko ka mila hanapaka lalan-drà ahy mihitsy ity ianareo tahaka ny manao be fihavy ity! Fa misy inona eh?"
- "Miala tsiny indrindra ary Ramose fa efa fantatray tokoa izany" hoy ilay rangahy, “fa ny vadinao mihitsy no misy resaka tianay hatao aminy, raha tsy mahadiso tompoko!"
- "Ny vadiko ?? efa miteny aminareo aho fa efa miandry vohoka be izy ka raha taitra amin’izao fahatongavanareo izao, dia asa izay hanjo antsika rehetra eto," hoy Ratrena namaly.
- "Azafady re tompoko ô!" hoy ilay rangahy, “mino mihitsy ary aho fa tonga dia ho fantany raha vao mampilaza aminy izahay.”
- "Vadiny aho rangahy ity a!" hoy Ratrema, “ambarao amiko izay anton-dianareo!"
- "Eny ary tompoko!" (nifanatona ny rehetra izay teo am-bavahady), - "dokotera miasa ao amin’ny hopitaly aho, ary asa raha fantatrareo fa nalefanay taty aminareo ny ambulance omaly vao maraina. Nisy ramatoa safotra teto araky ny voalazan’ny mpamily ka i madama vadinao, ilay bevohoka be, no nampiantso anay. Nilaza izy fa olona tsy fantany io ramatoa io; nahita ny toe-batan’ny vadinao koa ireo mpamily sy ny mpitsabo vonjy taitra, dia nibata fa tsy nanao fanontaniana firy, ary tonga dia lasa. Fantatray ny misy io ramatoa io satria tany aminy ny kara-panondrony, saingy nandehananay ny adiresiny dia mihidy tanteraka ny tranony ary ankizy madinika no tao an-tanàna. Koa nirahin’ny hopitaly izahay hiverina aty sao dia misy mahafantatra azy ihany eto amin’ny manodidina eto! Tsy mahatsiaro tena mantsy hatramin’izao ilay ramatoa, ka mila mitady haingana izay havany izahay…"
- "Fa olona tahaka an’iza izany ramatoa izany?" hoy Hery, nitsatsaingoka.
- "Andraso fa alaiko ao anaty kitapoko ao ilay kara-panondrony sao dia fantatrareo,"
- "Maninona ialahy ry Néné no tsy nilaza tamiko momba izany ambulance izany omaly?" hoy Ratrema nitrerona mafy ilay mpiambina.
- "Azafady mose fa noheveriko fa efa noresahin’i Madama anao izany omaly dia tsy niteny intsony aho!"
- "Ialahy ho'a tena tsss! Tsy fantatr’ialahy angaha fa izaho no tompo-mandidy ato amin’ity trano ity??"
Niverina ilay dokotera, nitondra ilay kara-panondro teny aminy.
- "Ity ilay izy," hoy izy, ary nomeny an-dRatrema,. Nanatona azy Alexia ary taitra be!
- "Hery! Kara-panondron’i mamanareo ity! Sariny mihitsy io!"
Taitra koa Hery, nanatona: "tena azy marina ity!!", hoy izy, "Dadabe a! tsy mahatsiaro tena i Mama???" Taitra be Dadabe ary niezaka niankina tamin-jafikeliny.
- "Ahoana koa ary izany," hoy ilay dokotera….
- "Ampidiro avokoa aloha ny fiara rehetra," hoy Ratrema, "dia mandrosoa daholo fa higagan’ny olona isika eto am-bavahady eto."
Novahan’i Alexia ny vavahady kely vy dia nampandrosoiny tao an-trano i Hery sy Dadabe ary ilay dokotera. Ratrema sy ilay mpamilin’ny hopitaly kosa samy nampiditra ny fiarany avy.
Malala, mandritra io fotoana io, dia mbola resin-tory tany ambony rihana. Asa na izy ilay nivoaka vao maraina, na vizan’ny fahafinaretana nifanaovan’izy sy Hery, fa torimaso hany izany! Na ny fifamaliana teo am-bavahady, na ny klaxon nataon-dRatrema aza, tena tsy nanaitra azy akory.
Nony tonga tao an-trano ny rehetra, ilay karatra amin’io eny amin’i Hery ihany, dia nasain’i Alexia nipetraka teo amin’ny salon i Hery sy ny Dadabeny ary ilay dokotera, fa izy kosa naka ranom-boankazo tany an-dakozia.
Very hevitra Hery, toa mihodina aminy avokoa ny tany aman-danitra. Inona ity mahazo azy! Nitady fahatonian-tsaina izy kanefa tsy azony mihitsy ny ainy. I Dadabe etsy mivaloharika malahelo an-janany vavy sy ity zafikeliny lahitokana.
Niverina Alexia nitondra ranom-boankazo mangatsiatsiaka tsara, nasainy nandray teo avokoa izy rehetra, dia nitombina nipetraka teo akaikin’i Hery izy.
- "Dia ahoana ny atao?" hoy Ratrema. "Fa maninona ny maman’i Hery?"
- "Aretim-po goavana ny mahazo azy," hoy ilay dokotera, "tsy maintsy mankany izao dia izao isika fa mi-delire foana hoe Hery, Hery, mijaly ny zanako, ilay ramatoa. Ka tsara raha manainga tsy misy hatak’andro izao isika ho any aminy.
- "Misaotra anao izahay dokotera fa efa hatry ny alina izao no nitaintaina ity zanany ity momba ny misy ny reniny," hoy Dadabe.
Fa tamin’izay fotoana izay indrindra, Malala nihaino moramora ny resaka tao alatrano, fa taitra ihany izy noho ny figodongodon’ny olona tao ambany. Nanarangarana nijery ary reny Ratrema niteny hoe :
- "Fa dia ahoana loatra ary no tsy nampandrenesan’i Malala ahy izany zavatra nitranga izany? Olona fantany tsara ange i ramatoa Ramihary, nahoana ary? Tsy azoko mihitsy."
Toa nanako tao an-tsain’i Malala ny tenin-dRatrema, nitazona ny fisefosefony izy. Nangorintsina tany an-dohany tany sady tsy tanany intsony fa dia naleony nisefosefo mafy tamin’ny vavany, sady niezaka nitsaitsaika hiala ilay toerana nihainoiny resaka. Tsipalotry Ratrema tampoka anefa ity vadiny toa saika nianjera ka nihazakazaka haingana izy namonjy azy. Tamin’izay indrindra no voasaringony ny tongotry ny latabatra kely misy ny abat-jour bakoly tsara tarehy, izay tena lafo vidy tokoa, ka nitontona ary niparitaka tamin’ny tany. Tsy nahoany izay nitranga fa hamonjy ity vadiny niankina ny rindrina ary nikorisa hipetraka amin’ny tany no tao an-tsainy voalohany.
- "Malala!" hoy izy," nanarina ny lohany, “maninona ianao????"
- "Hery, maman’i Hery," hoy Malala tamin’ny feo tena vizana tokoa!
Nikoropaka ny iray trano namonjy an’i Malala, ity vao tena loza.
- "Aza itangoronanareo eo izy," hoy ilay dokotera "fa mila rivotra madio. Tazony eto dia somary orina kely tahaka izao… Haka masque à oxygène atsy anaty fiara aho. Batao tsimoramora izy ho eo ambony canapé;eo, fa mangatsiaka loatra amin’ny tany."
Samy nanao izay ho afany teo ny rehetra hamelombelona an’i Malala. Niverina avy any ilay dokotera nitondra ny fitaovany ary nametaka ilay saron-tava tamin’ny tarehan’i Malala. Nojereny ny tosi-drany… Afaka kelikely dia hoy ilay dokotera :
- "Tsara raha tonga dia manainga dieny izao isika rehetra mitondra an’ity reny bevohoka ity any amin'ny hopitaly, fa sao misy tampoka tsy azontsika anoharana. Tadidio fa olon-droa izy ka mila mitandrina tsara. Aleo misoroka mba tsy hanenenana."
- "Alexia!" hoy rainy taminy, “mandehana haingana ianao, alaivo Toky ao ambony ao fa sao mitomany eo raha tsy eo ny mamany. Izahay rehetra eto hibata ny reninao ho any anaty fiara. Haingàna ianao fa vonjy aina ity."
Lasa alexia niakatra, noraofiny ambongadiny avokoa izay entana fitondra miaraka amin’i Toky, ary nentiny nidina tany ambany ka nataony tao anaty fiaran-dRatrema. Niakatra izy avy eo naka ny zazakely. Ny hafa rehetra kosa somebiseby ery nibata sy nampiditra ity ramatoa bevohoka ao anaty fiara, izay tsy mahatsiaro ny tenany intsony.
- "Entin’ialahy ry Hery ny fiarako," hoy Ratrema, "ary Alexia no mitaiza an’i Toky ambara pahatongantsika any amin’ny hopitaly. Aza ilaozanareo mihitsy izahay fa hampiasa detresse eny an-dalana."
Novelomina ny fiara, novahana ny vavahady, dia nifanaraka teny ny fiara roa, ka ilay an’ny hopitaly nanana anjomara sy jiro no nitari-dalana.
Teny an-dalana, Hery no nitondra ny fiara ary Alexia sy Toky no nipetraka teo anilany teo. Asa na nisy inona fa najoron’i Alexia i Toky ka niezaka nisarangotra amin’ity tanany kely tamin'ity "rainy". Taitra tampoka Hery nahita ity zanany niezaka hisarangotra taminy. Io ilay zanako tsy foiko, hoy izy niteny irery tany an-tsainy, tazain’ilay malalako izay tokony hanomezako ny fitiavako iray manontolo, kanefa toa zarazaraiko amin’olon-kafa. Nanganohano ny masony ary latsaka ny ranomasony.
Onena i Alexia nahita an’i ity malalany latsa-dranomaso. Dadabe nipetraka tao aoriana tamin'io tsy dia nahatsikaritra ny zava-niseho fa lasa fisainana sady nivavabavaka mafy mba hampitony ity onjan-dranomasina mitady handetika ny fiainan'izy mianakavy ity.
Rehefa tonga tany amin'ny hopitaly ireto fiara roa, avy hatrany dia nalefa tao amin'ny sampana miandraikitra ny fampiterahana i Malala. Efa niandry tao ny fandriana hitondràna azy sy ny mpitsabo mpanampy vitsivitsy. Nivoaka ny fiara ny rehetra ary nanampy nibata sy nametraka azy teo ambony fandriana. Dia natosika niditra tany anatiny. Tsy niala teo akaikin'ny vadiny mihitsy Ratrema tamin'io na dia iray segondra aza. Alexia no nitrotro an’i Toky nanaraka azy avy ato aoriana. Hery sy ny Dadabeny kosa mbola taraiky nanidy ny fiara tany ivelany.
Nony tafiditra tao anatiny Hery mianaka dia nanontany an'i Alexia hoe:
- "Nalefa aiza?"
- "Tsy haiko," hoy Alexia, "fa tsy navelan-drizareo nanaraka tany aho sy ny zazakely fa tsy maintsy miandry eto hono, niditra tetsy amin’itsy varavarana itsy ry zareo."
Nisy zavatra tena nahamahana an’i Hery, ary tena tsy azony mihitsy. Inona marina ny zavatra nitranga omaly, naninona Malala no tsy nilaza nefa izy izany nahita an’i Mama nitambotsitra teo am-bavahadiny??? Tsy mino mihitsy aho fa tsy fantatr’i Malala i Mama!" hoy izy niteny irery tany an-tsainy.
Nanatona ny accueil izy dia nanontany,
-"Ianareo ve mety naheno hoe nisy ramatoa nentina tamin'ny ambulance taty amin’ity hopitaly ity omaly, nefa tsy fantatra ny havany?"
- "Ié," hoy ilay ramatoa, "tonga hatraty aminay tokoa izay resaka izay, andraso fa i dokotera Herinaivo teo no mahalala azy fa tokony hiverina eo izy. Tsy ato amin’ity service ity mantsy izy iny no miasa, ka tsy afaka hijanona ela any."
Nisokatra ilay varavarana nampidirana an'i Malala teo, nivoaka tao ilay dokotera Herinaivo, nitsangana Alexia
- "Nanao ahoana izy dokotera?" hoy Alexia nanatona.
- "Non! tsy maninona ka, efa voarain’ny dokotera tsara izy satria vao teny an-dalana aho dia niantso azy tamin’ny findainy. Efa nanome toky izy fa tsy misy maninona fa mety malaise kely fotsiny, nisy nanaitra azy tampoka!!! aza matahotra intsony ianareo. Efa miomana hanao echographie ry zareo mba hijerena akaiky ny zava-misy, sao…"
- "Dokotera a!" hoy Hery, "ianao ihany izao no mahalala ny misy ny reniko fa aiza no misy azy?"
- "Izay mihitsy no nivoahako tao haingana, manaraha ahy ianareo mianaka. Oay, ity zazakely ity tsy mahazo mandeha mankany fa tsy maintsy mijanona eto, sady nijery an’i Alexia izy. Zanakao angaha izy io?"
Nojeren’i Alexia i Hery;
- "Zandriko ity ka," hoy Alexia, mamanay ilay niditra tany teo.
- "Andao ary," hoy ilay dokotera.
Norohan’i Hery ny malalany dia lasa izy telo mianaka nandeha, fa i Alexia sy Toky kosa nijanona teo amin’ny efitra fiandrasana ihany.
- "Tsy haiko intsony izay mitranga ato fa toneo mihitsy ny fonareo. Zanakao ilay Mme Ramiara rangahy be ô? manana endrika mitovy aminy ianao izany."
Tsy nisy nahateny intsony teny an-dalana fa ny ahatongavana haingana ao amin’ny réanimation no tao an-tsaina. Rehefa tonga dia nanontany ny dokotera namany izy ary nanatona azy mianaka:
- "Tsy afaka miara-miditra any ianareo mianaka fa mandehana tsirairay!"
- "Ndàna letsy" hoy Dadabe.
Niditra Hery, nidobodoboka be ny fony, nalahelo mafy izy nahita ity mamany sous-sérum ary mbola tsy mahatsiaro tena. Noraisiny ny tanany sady nanganohano ny masony.
- "Mama!" hoy izy nibitsibitsika, “aza ilaozanao aho fa ho very!!!"
Tao anatin'izay fotoana izay indrindra koa anefa no injay fa niraondraona ny vibreur-n’ny findain’i Hery tany am-paosiny tany. Nojereny, numeraon-dRatrema ary dia noraisiny :
- "Hery a! Tongava aty ialahy fa tadiavin’i Malala," mikitakita be no tahaka ny tezitra izany ny feony!
- "Mama anie ato tsy mbola mahatsiaro tena e!"
- "Ie, azoko tsara fa i Malala no mitady an’ialahy fa tsy izaho, tongava araka izay azon’ialahy atao," sady notapahiny ny antso.
Fa inona indray izany, tena tsy mazava amiko mihitsy. Rehefa mbola velona aloha ny mamako dia izay no zava-dehibe amiko hoy izy tany an-tsainy.
Nitsangana izy nony avy eo dia nivoaka niantso ny Dadabeny:
- "Aleo aloha Dadabe indray no miandry azy ao fa tsy maintsy miverina ary amin’ny maternité ary aho fa misy niantso ahy."
Tonga dia niditra Dadabe fa tsy nanisy fanontaniana. I Hery kosa nandeha moramora nivoaka hamonjy an’i Malala sy Alexia.
Toa nisy lanja mavesatra niala tamin’i Hery nony nahita an-dreniny mbola miaina izy, eny fa na dia mbola tsy nahatsiaro tena aza. Tsy mampandry saina azy koa anefa ity nataon’i Malala tsy nampahafantatra ny zava-nitranga akory fa tahaka ny nody fanina ary nanao fanahy iniana ny tsy hilaza mihitsy aza.
Raha sendra nampiditra ny tanany tany am-paosiny iny i Hery teny an-dalana hamonjy ny trano nisy an'i Malala, dia tsapany tao ny fanalahidin’ny fiaran-dRatrema izay tavela tany aminy.
- "Afa-baraka!" hoy izy, "mety ity angamba no nahatezitra an-drabaininy be teo. Mety saika haka zavatra tao anaty fiara izy kanjo ny lakile taty amiko. Izay mihitsy no niantsoany ahy. Asa izay ho vavan’iny, nefa nambarany mazava fa i Malala no mitady ahy. Tsy te-hieritreritra an’i Malala sy izay nanjo azy koa aho satria tsy nianjera mafy akory izy tany an-trano. Sady nisy dokotera teo, raha oharina ny manjo an’i Mama dia tahaka ny sila-hoho ny nahazo azy… Izy bevohoka rahateo ka izay no nampikoropaka ny rehetra."
Nony tafiditra ilay efitrano fiandrasana izy dia indreo izy mianaka niandry azy:
- "Mandehana mankao amin’ny efitra 236 fa mitady an’ialahy i Malala," hoy Ratrema sady nivandravandra be izy. Tsy nisy fanontaniana akory ny momba an'i Mama na dia kely aza. Natolotr’i Hery ilay lakilen'ny fiara no taitra izy tsy nahita an'i Toky.
- "Fa aiza i Toky?" hoy i Hery.
-"Efa nampidirana berceau tao amin’ny efitr’i Neny," hoy i Alexia, "dia napetraka ao izy."
- "Nanao ahoana i Mamanareo ry Hery?" sady nosakambininy ity malalany.
- "Mbola tsy mahatsiaro tena izy fa ... tsy haiko ny ilazàna azy fa mbola nikoropaka koa aho tamin’ilay nantsoinareo."
Naterin’i Alexia tany amin’ny efitra nisy an’i Malala i Hery ary dia niara-niditra izy roa, Malala amin’io matory mihorirana mijery ny varavaran-kely toa nanome lamosina azy ireo. Nony tafiditra sy voakatona ny varavarana dia nihodina Malala ka niharihary ilay lambam-pandriana avoitran’ity kibo beny.
- "Alexia a! Ndàna miaraka amin’i Dadanao maka izay fitaovako rehetra any an-trano fa efa eto i Hery afaka hiambina tsara ahy."
- "Ka ny maman’i Hery anie ry Neny mbola tsy mahatsiaro tena e! Tokony ho any aloha izahay roa izao kanefa irahinao indray aho hody sahady. "
-"Ndàna fa i Dadanao teo ange nilaza fa hampilaza ny any am-piasàny momba ny tsy fahafahany e!"
Tsinjon’i Alexia fa misy zavatra konikononin-dreniny indray ka te hahita an’i Hery samy irery izy, sady aleo koa ireo hifanazava eo hoy izy tany antsainy tany fa tsy tiako ho hita akory.
Nivoaka i Alexia sady nisintona an’i Hery ihany koa; tao amin’ny lalantsara izy vao niteny hoe:
- "Anontanio azy tsara ny anton’izao rehetra izao fa tsy azoko mihitsy ity tantara ity. Lasa aho fa tena tiany mihitsy ianao hiresaka samy irery aminy."
Lasa Alexia, ary dia niverina niditra moramora i Hery.
- "Azonao hidina tsara ve io varavarana io ry Hery?"
Nodinihin’i Malala izy dia nasainy nankeny aminy. Tsy noraharahian’i Hery akory ny teniny fa i Toky no nojereny, kanjo natory be ny anao lahy. Nitodika teny amin’i Malala izy avy eo sady nanatona.
- "Hery a!" sady noraisin’i Malala ny tanany dia nasainy nisafo ny kibony. “Tsapanao tsara ve? Io ilay fitiavako anao” sady nesoriny ilay lamba firakotra ka ilay akanjo fitena sisa no teny aminy izay hany nanakona ny kibony. Notazoniny ihany ny tanan’i Hery hisafosafo ity vohoka eny aminy ary nosintoniny niakatra ilay akanjo mba tsy hisy elanelany intsony fa tiany ho re ny hafanan’ny tanan’i Hery. Ity farany rahateo mihevitra tanteraka fa zanany ity ao an-kibo ka nanomboka naka fihiny ery.
- "Tiako loatra ianao, ary satriko ho ianao foana no ho eto anilako eto, Hery a! Avia aty, fa fohy loatra ilay tamin’ny vao maraina teo."
Nalefany tany amin’ny patalohan’i Hery ny tanany, ity farany moa tahaka ny nosintomin-javatra ka nanadino ny olana mianjady aminy rehetra fa nifantoka tanteraka tamin’i Malala. Novahan'i Malala izay bokotra rehetra teny amin'i Hery sady nesoriny ny akanjony. Noraisiny ilay filahian'i Hery izay efa niha henjana sady nolalaoviny. Tsy nahatohitra ny fankampanahy teo anoloany i Hery, ka dia niondrika moramora sady nampidina ny tanany tany amin’ny fivavian'i Malala izay efa tsy nisy rakotra intsony. Novelarin'i Malala ny feny sady hoy izy tamin'ny feo miangoty:
- "Mmmmhhhhh, avia fa efa miandry anao mafy aho, sady nikisakisaka izy hanatomotra ny sisim-pandriana mba hahafahan'ity olon-tiany miditra any anatiny. Nanatona I Hery, niditra tao anatin'I Malala izy ary nakariny hifamatotra teo amin'ny valahany ny fe sy ny ranjon'i Malala. Tsy ela akory taorian'izay dia henony niakatra ny tsirom-pahafinaretana tany anatiny tany ary dia nahatsiaro sambatra ery izy. Samy namikitra teo amin'ny kibon'i Malala izy roa mba tsy hihetsehany be loatra. Tampoka tsy nampoizin'i Hery akory, dia injay fa nikiaka nisintona azy mafy araka izay azony natao i Malala. Fantatr’i Hery avy hatrany fa tojo ny farantampom-pahasambaran'ny nofo izy ary izay ihany koa no nanaitra ny tao anatiny te hibosesika hivoaka. Asa anefa izay nandalo tao an-tsainy fa notsoahany haingana ny filahiany ary dia navelany hifantsitsitra teo amin'ny fen'i Malala teo ny ranonainy iray manontolo. Difotry ny hasambaran'ny nofo izy roa, ary dia ohatran'ny resintory avy hatrany i Malala. Lasa fisainana i Hery nony niverina tamin'ny zava-misy ny saina aman'eritreriny mandinika ity reny bevohoka efa ho teraka afaka roa volana nefa toa mitady firaisana ara-nofo tsy an-kijanona aminy!!
Niherikerika nitady seza izy nony avy eo fa godro tanteraka ny lohaliny ka hila tsy hahatsangana intsony. Naka toerana izy no sady nanontany an'eritreritra hoe: Fa inona mihitsy no mahazo ahy amin’ity Malala ity eh, ohatran'ny azon'odimpitia tsy haiko resena izany aho aminy???
Afaka kelikely, nitsangana izy nampiditra ny silipony. Nifoha tampoka anefa i Malala sady niharina ary nibanjina azy tsara….
- "Oay!!!!! Ny siliponao……. oadray marina, tena adinoko…. aza hitako!!!” hoy Malala.
- "Fa misy inona?" hoy Hery taitra tsy nahahetsika.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 2:: Hametraka hevitra (4) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)